भारतमा रहेका नेपालीलाई देश निकाला गर्ने भारतको यस्तो ष ड्यन्त्र पूरा पढी सक्दो से यर ग र्नुस – DIVAKHABAR.COM
देख्ने बितिकै सुत्ने बेला पाथिभरा माताको दर्शन गरी फोटोमा छोएर २०७७ -५-२० गतेको राशिफल पढ्नुहोस सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस प्रणाली लागु हुदै पुरा पढ्नुस कोरोनाको खोप कसले पाउने कसले नपाउने पुरा पढ्नुस खुसिको खबर आज नेपालमा एकैदिन थप १ सय ३४ जनाले कोरोना जितेर घर फर्के ! शिव मन्दिरमा मन्दिरमा भेटियो अनौठो चमत्कारीक सर्प ! हेर्ने मानिसको घुइंचो तपाई पनि एक पटक अबस्य हेर्नुहोला ।
भारतमा रहेका नेपालीलाई देश निकाला गर्ने भारतको यस्तो ष ड्यन्त्र पूरा पढी सक्दो से यर ग र्नुस
भारतमा बस्ने नेपाली र नेपाली भाषीहरु अब अ’प्ठेरोमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । भारतले अब आफ्ना देशमा रहेको आप्रवासीहरुलाई देशबाट निकाल्ने घोषणा गरेको छ ।
यस अघि आसाममा लागू गरिएको नेसनल रजिस्ट्रर अफ सिटिजन्स अब मुलुकभर लागू गर्ने घोषणा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले अब छिट्टै यो नियम लागू लागू गरिने बताएका छन् । उनले सबै अवैध आप्रवासीहरुलाई देशबाट बाहिर निकालिने चेतावनी दिएका छन् ।
भारतीय दैनिक पत्रिका हिन्दूस्तानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।उनले भने, ‘तपाईंहरु ईंग्ल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका गएर बस्नुस् ।
तपाईंलाई कसैले घुस्न दिने छैन । भारतमा आएर चाहिँ कोही कसरी बस्न सक्छ ? यसरी देश चल्दैन ।।उनले अब भारतमा बस्न भारतीय नागरिक नै हुनुपर्ने बताएका छन् । भारतीय बाहेक अरु गैरकानुनी रुपमा बस्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा नै भाजपाले सो कुरा उल्लेख गरेको भएर देशभर एनआरसी लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको साहले स्मरण गराए ।
यसका अलावा अन्य कानूनी प्रक्रियाहरुमार्फत कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । आसाममा मात्रै झण्डै १९ लाख विदेशी नागरिक भएको जानकारी दिइएको छ । साथै भारतले निकालेको नक्सा बारे जताततै बि वाद छ
भारतको विवादित नक्साका बारेमा जताततै विरोध भइरहेको छ । नेपाल, पाकिस्तान र स्वयं भारतमै पनि भारतको नयाँ नक्साको विरोध भइरहेको छ ।
नेपालमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले भारतीय नक्साको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेको समयमा सरकारले कालापानी नेपाली भूभागमा पर्ने दावी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
मन्त्रालयको ‘लेटर हेड’मा जारी विज्ञप्तिमा संक्षिप्त हस्ताक्षर भएको, हस्ताक्षरकर्ताको नाम र ओहोदा उल्लेख नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अपुरो रहेको भन्दै नेपालभित्रै टिप्पणी भइरहेको समयमा यही विषयमा पाकिस्तानले भने भारतको कदमको कडा विरोध गरेको थियो । भारतले नक्सा जारी गर्दैमा स्थिति परिवर्तन नहुने पाकिस्तानले प्रष्ट पारेको थियो । टाईम्सअफनेपाली
Previous नेपाल-भारत सीमामा तारबार लगाउनु हुँदैन भन्ने यी नेता को हुन ?
Next भारतले भन्यो नेपालले बनाएको नयाँ नक्सा हामिले मान्ने वाला छैनौं
भारतले कसैको सिमा मिचेको छैन बुझ्यौ – भारतिय गृहमन्त्रीले भन्यो
नेपालमा फेरि कडा भन्दा कडा नाकाबन्दी लगाउछु भन्दै भारतको ध म्की
भारतीय मिडियाले दियो द बाब“मोदी सरकारले नेपालीहरुलाई भारतबाट ह टाउनु पर्छ”
देख्ने बितिकै सुत्ने बेला पाथिभरा माताको दर्शन गरी फोटोमा छोएर २०७७ -५-२० गतेको राशिफल पढ्नुहोस 09/04/2020
सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस प्रणाली लागु हुदै पुरा पढ्नुस 08/24/2020
कोरोनाको खोप कसले पाउने कसले नपाउने पुरा पढ्नुस 08/20/2020
खुसिको खबर आज नेपालमा एकैदिन थप १ सय ३४ जनाले कोरोना जितेर घर फर्के ! 08/16/2020
शिव मन्दिरमा मन्दिरमा भेटियो अनौठो चमत्कारीक सर्प ! हेर्ने मानिसको घुइंचो तपाई पनि एक पटक अबस्य हेर्नुहोला । 08/13/2020
केन्द्र सरकारले लकडाउन नगर्ने, जोखिम बढेका जिल्लामा सिडिओ र स्थानीय तहलाई अधिकार 08/11/2020
एउटै ढुंगाबाट शिव लि’ङ्ग र संसारकै सबैभन्दा ठुलो शिव लि’ङ्ग ! पूरा समाचार पडेर ॐ जप गरौ, मनोकामना पुरा हुनेछ !! 08/10/2020
पद होइन जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने र विकास गर्ने जिम्मेवारीमा हामी छौं 08/08/2020
राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा के-के हुँदैछ ? 08/08/2020
पहिलो श्रीमानबाट एक करोड, दोस्रोबाट ४५ लाख लिएर तेस्रोसँग अमेरिका 08/08/2020
देख्ने बितिकै सुत्ने बेला पाथिभरा माताको दर्शन गरी फोटोमा छोएर २०७७ -५-२० गतेको राशिफल पढ्नुहोस
सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस प्रणाली लागु हुदै पुरा पढ्नुस
कोरोनाको खोप कसले पाउने कसले नपाउने पुरा पढ्नुस
खुसिको खबर आज नेपालमा एकैदिन थप १ सय ३४ जनाले कोरोना जितेर घर फर्के !
© 2019-2020 Divakhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित | Newsever by AF themes.